हल बन्द गरिँदा 'चपलीहाइट ३' मारमा : निर्माता भन्छन् 'खुल्ने बित्तिकै फिल्म लगाउँछौं'- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — सरकारले माघ १५ गतेसम्म फिल्म हल बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदर्शनमा आएको तेस्रो दिनमै 'चपलीहाइट ३'को प्रदर्शन स्थगन गरिएको छ । कोभिड महामारीकै कारण झण्डै २ वर्ष अलमलमा परेको फिल्म फेरि महामारीकै चपेटामा पर्‍यो ।
यसअघि २०७६ को चैत २८ मा फिल्म प्रदर्शन गर्ने तयारी थियो । तर चैत ११ देखि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि निर्माता अर्जुन कुमार फिल्मको प्रदर्शन स्थगन गर्न बाध्य भए ।
यस्तै निर्देशक/निर्माता सुदर्शन थापाको फिल्म प्रदर्शन गर्न तीन दिन बाँकी हुँदा स्थगन भयो । निर्माता कुमारका अनुसार 'चपलीहाइट ३' स्थगन गर्दा झन्डै २ वर्ष १ करोड ५० लाखको लगानी फ्रिज भयो । लामो समयपछि हलमा दर्शक फर्कने छाँटकाँट देखिएपछि प्रदर्शन आँटेका थिए कुमारले । तर विविध कारणले यसबीच फिल्मको प्रदर्शन मिति सरिरह्यो । पुस ३० भने फिल्म प्रदर्शनको फाइल मिति थियो । तर लक्षित दर्शकलाई फिल्म देखाउन नपाउँदै हल बन्द हुँदा उनलाई तनाव थपिएको छ ।
'वर्ड अफ माउथ सुरु भएको थियो । विस्तारै दर्शक आउँदै थिए । तर हामी कोभिडको प्रतक्ष मारमा पर्‍यौं । हल चलिरहेको भए फिल्म चलाइन्थ्यो । तर अब हल नै बन्द भएपछि फिल्म कहाँ देखाउने ? २ वर्षअघि पनि यही स्थिति थियो । अहिले पनि अवस्था त्यस्तै भयो । अहिले कोभिड पनि धेरै नै बढेको छ । मानिसहरु डराएका छन् । डराएकै कारण फिल्म हेर्न आइदिएनन् । मानिसहरु आइदेलान् भन्ने थियो । अब फेरि फिल्म प्रदर्शन गर्दाखेरी दर्शक आउनुहोला भन्ने आसा छ,'निर्माता कुमारले भने।
फिल्म प्रदर्शन अगाडि नै प्रचारमा खर्च गरिसकेको बताउँछन् कुमार । फेरि फिल्म प्रदर्शन गर्दा प्रचारमा उस्तै खर्च बढ्ने भएपछि उनी तनावमा छन् । '१५ गतेबाट हल खुलेपछि फेरि प्रचार गर्नै पर्‍यो । फिल्मको लागि राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु । त्यसैले प्रचार गर्ने आँट आएको छ । यस्तो अवस्थामा हल खोल्नुपर्छ भन्ने झण्डा बोक्दै हिँड्नु भएन । अब सरकारको नियम मान्नुको विकल्प छैन । आसा छ बन्द भएका हल चाँडै खुल्नेछन्,'कुमारले सुनाए,'मैले राम्रो मितिका लागि फिल्मलाई कति सारें । धेरै भागें, तर धेरै भाग्न सकिन । आखिर मारमा परियो । आर्थिक भार थपिएको छ ।'
निर्देशक निकेश खड्का यसरी फिल्म हल बन्द गरिहाल्न नहुने तर्क गर्छन् । 'वर्ड अफ माउथबाट दर्शक आउन सुरु भएको थियो । हल बन्द नै नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । खोप कार्ड देखाएर हल चलाउन सकिन्थ्यो । दिल्लीमा हल बन्द भयो । तर मुम्बईमा हल चलिरहेका छन् । हामीकहाँ पनि केही वैकल्पिक बाटो निकालेको भए हुन्थ्यो । तर यस्तो निर्णय आएपछि मान्नै पर्‍यो,'खड्काले भने,' हामीले यो फिल्मलाई धेरै मितिमा सारिरह्यौं । फिल्मले राम्रो मिति पाओस्, सो पनि धेरै पाओस् भन्ने सोचेरै फिल्म सार्‍यौं । राम्रो मिति छान्न सोच्दा सोच्दै गलतै मिति पर्‍यो ।'
म्युजिक भिडियोको निर्देशनमा सक्रिय निर्देशक खड्का हल खुलिसकेपछि फिल्मले राम्रो शो पाउला/नपाउला भन्ने पीरमा छन् । 'तीन दिन मात्र फिल्म चल्नु त हाम्रो दुर्भाग्य नै हो । मेरो फिल्म मैले देखाउनै पाइनँ । तर अर्को पटक हल खुल्यो भने कसरी प्रदर्शन गर्ने होला ! तीन दिन चलिसकेको हुनाले त्यही हिसाबमा हलले शो दिने होला । अहिलेसम्म फिल्म कसरी चलाउने भन्ने नै निश्चित भइसकेको छैन । हामी टिममा बसेर छलफल गर्छौं,' उनले भने । उनी फेरि फिल्म प्रदर्शन गर्नुपरे प्रचारमा ४/५ लाख खर्च लाग्ने बताउँछन् ।
अधिकांश हल आइतबारदेखि बन्द भएका छन् । हल बन्द गर्नेबारे भने हलवालाको छाता संगठन चलचित्र संघले केही निर्णय गरिसकेको छैन । हलवालाले हलमा फिल्म देखाउन बन्द गरिसकेका छन् । तर चलचित्र संघबाट कुनै ठोस निर्णय नआउँदा उनीहरू हल बन्द गर्ने वा नगर्ने अलमलमा छन् । 'अहिले हामीले फिल्महरू होल्डमा राखेका छौं । हल बन्द गर्ने/नगर्ने भन्ने कुरा संघबाट आइसकेको छैन । अब फिल्म नचलाउनु भनेको त हल बन्द गरेको जस्तै भइहाल्यो नि,'क्युएफएक्सका कार्यकारी अधिकृति रोशन अडिगाले भने ।
प्रकाशित : माघ ३, २०७८ १४:१३
सीमामा बढ्दै कोरोना संक्रमितको संख्या
माघ ३, २०७८ शंकर आचार्य
पर्सा — कोरोनाको तेस्रो लहरमा पनि वीरगन्जमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक थपिने क्रम रोकिएको छैन । पछिल्लो दुई सातायता वीरगन्जस्थित नेपाल-भारत सीमामा रहेको हेल्थ डेस्कमा गरिने एन्टिजेन परीक्षण र नारायणी अस्पतालमा गरिने पीसीआर परीक्षणको नतिजाले वीरगन्जमा संक्रमण तीव्र रुपमा विस्तार भइरहेको देखाएको छ ।
सीमास्थित हेल्थ डेस्क प्रमुख डा अनिशा महतोका अनुसार, सोमबार दिउसो १ बजेसम्म २ सय जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
आइतबार दिनभरि डेस्कमा ३ सय ५९ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ३० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । डेस्कका स्वास्थ्यकर्मीले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयका ३० कर्मचारीको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा चार जनामा कोरोना संक्रमण पुष्ट‍ि भएको थियो ।
शनिबार डेस्कमा ३ सय ८३ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा १७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । डेस्कमा पुस महिनामा मात्र १ सय ५६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको डा महतोले जानकारी दिइन् । ‘पुस ८ देखि दैनिक १-२ जनामा संक्रमण पुष्टि हुन थालेको हो,’ उनले भनिन्, ‘तर‚ पुस २० देखि दैनिक १०-११ जना संक्रमित फेला पर्न थाले, पछिल्ला दिनमा यो क्रम झनै बढेको छ ।’
नारायणी अस्पतालमा पुस २९ गते ४७ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ३१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । तीमध्ये २६ पर्साका हुन् । पुस ३० गते ६४ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ४३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । तीमध्ये ३४ जना पर्साका हुन् । आइतबार ६२ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा २७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । तीमध्ये २६ जना पर्साकै हुन् ।
अस्पतालका कोभिड संयोजक डा उदय नारायण सिंहका अनुसार अस्पतालमा हाल तीन जना कोरोना संक्रमित उपचाररत छन् । तीमध्ये कसैलाई पनि अक्सिजन दिनु परेको छैन । सबैको अवस्था सामान्य छ । हालसम्म जिल्लामा २ सय सक्रिय कोरोना संक्रमित रहेको र अधिकांश होम आइसोलेसनमै रहेको उनले बताए ।
अघिल्ला लहरहरूजस्तो तेस्रो लहरमा अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या न्यून रहे पनि संक्रमणदर भने उच्च रहेको डा. सिंह बताउँछन् । आउँदा केही दिन संक्रमणदर अझै बढ्दै जाने सम्भावना रहेकाले सर्वसाधारणले सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
प्रकाशित : माघ ३, २०७८ १४:०९